Mpịakọta arịa ụlọ icho mma dị nnọọ obere balconies | Bezzia
arịa ụlọ mpịachi iji chọọ nnukwu mbara ihu mara mma
Maria onyekwere | 07/01/2022 18:00 | Aghụghọ mma
N'oge ejichiri, anyị bụ ndị nwere ike ịnụ ụtọ ohere dị n'èzí n'ụlọ anyị nwere ezigbo chioma. Ọbụna nke nnukwu mbara ihu ha ghọrọ obere akụ. Ma ọ bụ ya mpịachi arịa ụlọ Ndị a nwere ike ịghọ ihe ndọtị nke ụlọ.
Balconies nke ụlọ Ha na-adịkarị obere mana nke ahụ abụghị ihe mgbochi iji jiri ha mee ihe. Ị nwere ike iche onwe gị na ịṅụ kọfị n'ụtụtụ n'oge okpomọkụ? Ị nọ ọdụ na mgbede na-agụ? Gị na onye òtù ọlụlụ gị na-eri nri abalị? Ị nwere ike ime ya site n'itinye ngwongwo ole na ole.
1 arịa ụlọ mpịachi
2 Ngwá ụlọ dị mkpa
3 Jikọta ha na ...
arịa ụlọ mpịachi
Ngwá ụlọ mpịachi bụ ihe ọzọ dị mma iji chọọ nnukwu mbara ihu mara mma. Ndị a abụghị nanị, n'ozuzu, ìhè, ma na-ekwe ka anyị reconfigure ohere mfe mgbe ọ dị mkpa. Apịaji ha na-ewe obere ohere, nke ga-enye gị ohere iji ohere ahụ n'ụzọ ọzọ. Ma ndị a abụghị naanị uru nke ụdị ngwá ụlọ a dị ka ị nwere ike ịhụ n'okpuru ebe a.
Ha bụ ngwá ụlọ dị mfe; ha na-atụ ntakịrị ma anya na-ewe obere oghere.
Enwere ike ịpịaji ma chịkọta ya dị mfe mgbe anyị chọrọ iji ohere ahụ n'ụzọ ọzọ ma ọ bụ nanị kwadebe ya maka oyi.
Ha dị ọnụ ala.
Ngwá ụlọ dị mkpa
Kedu arịa ụlọ mpịaji dị mkpa na mbara ihu? Mkpa onye ọ bụla ma ọ bụ ezinụlọ ọ bụla dị iche, ma e nwere ngwá ụlọ abụọ na-adịkarịghị abanye na mbara ihu ka ha na-eme ka ọ bụrụ ebe na-arụ ọrụ. Anyị na-ekwu n'ezie banyere tebụl na oche.
una okpokoro mpịachi okirikiri ọ bụ mgbakwunye nnabata mgbe niile. Ma… kedu ihe ọ ga-abụ itinye tebụl na-enweghị opekata mpe oche abụọ gburugburu ya? Ụdị ụdị a ga-enye gị ohere ịme ọtụtụ ihe omume ná mba ọzọ: rie kọfị, rie, gụọ, rụọ ọrụ ... ma soro onye ọzọ mee ya.
Ị nwere obere oghere? Nzọ na a okpokoro ọkara okirikiri na ị nwere ike itinye aka na ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ mgbidi ma dochie oche ndị ahụ na bench n'akụkụ nke mbara ihu ahụ. Eleghị anya ị gaghị adaba oche abụọ mana oche nwere ike ịnabata mmadụ abụọ. Ị nwere ike idowe tebụl akụkụ anọ? Ọ bụrụ na oghere dị na mbara ihu gị na-enye ya ohere na inwe ike iri nri na iri nri n'èzí bụ ihe kacha gị mkpa, egbula oge!
Nzọ na tebụl na oche ndị e ji ihe ndị dị mma maka oghere dị n'èzí. Ihe ndị na-akwado nke ọma Inlement ihu igwe dị ka ígwè, eriri sịntetik ma ọ bụ osisi okpomọkụ dị ka teak.
Jikọta ha na ...
Un workbench ma ọ bụ hapụ ya na nchekwa ha anaghị adịkarị na mbara ihu. N'elu oche ị nwere ike ịnọdụ ala karịa ka ị nwere ike ịnọ n'oche ndị nwere otu oghere dị ka nke a. Ọ bụrụ na ị na-etinye ya na mgbidi ma tinye ụfọdụ ute, ị nwekwara ike zuru ike n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Ọ bụ ihe kacha mkpa gị inwe ebe ị ga-edina ala na zuru ike? Mgbe ahụ, ị ​​​​nwere ike ịhọrọ itinye sofa ma chefuo tebụl na oche ma ọ bụrụ na ịnweghị ohere maka tofo. Gaa maka sofa nkuku ma jiri ya mechaa ihe ahụ okpokoro kọfị mpịaji. Ọ ga-enyere gị aka ị nweta kọfị ma ọ bụ na-eri nri nri dị mfe.
Ịchọrọ ime ka oghere ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ? Ọ bụrụ na ala nke mbara ihu gị adịghị amasị gị ma ọ bụ na ọ nọ n'ọnọdụ adịghị mma, gịnị ma ị tinye a usoro ikpo okwu? Ha dị nnọọ mfe idowe; dị nnọọ ole na ole mfe clicks. Ma ọ bụrụ na mbara ihu gị dị ntakịrị, ọnụ ahịa ya agaghị agbago. A na-akwụ ha ọnụ n'etiti € 16 na € 23 kwa square mita. Ọzọkwa textiles ga-enyere gị aka na ikpo ọkụ.
Echefukwala tinye ụfọdụ osisi. Ndị a na-eweta ịdị ọhụrụ na agba na mbara ihu. Na, ọ dabere na osisi ị na-ahọrọ na ebe ị na-etinye ha, ha nwere ike ọbụna nye gị nzuzo ka ukwuu. Nzọ na ụdị nrụzi dị ala nke nwere ike ịnọ ogologo afọ niile na nke na-enweghị nnukwu nku ka ha ghara izu ohi buru ibu.
Ịchọ nnukwu mbara ihu na arịa ụlọ mpịachi dị nnọọ mfe ma dịkwa ọnụ ala. Lelee ụfọdụ ma dozie mbara ihu gị tupu mmiri abịarute ka ịmalite iji ya mee ihe ozugbo enwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Aghụghọ mma » arịa ụlọ mpịachi iji chọọ nnukwu mbara ihu mara mma
Gịnị kwesịrị ịbụ ịzụlite nwa hypersensitive
4 ọgwụgwọ okike iji gwọọ isi ọwụwa